Ukuphupha ngecawa Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa uthetha ngebhanti, kunokuthetha izinto ezahlukeneyo kakhulu. Kwelinye icala, inokuba yicawa ngokwenkolo. Indlu yokuthandaza, ngokutsho kwebandla elincinci, elinokuthi lifumaneke lizimele kufutshane okanye ehlathini. Apha iindwendwe kunye namakholwa banokuthandaza, balayite amakhandlela, kwaye bathule bodwa kunye noThixo. Iicawa zolu hlobo zihlala zisetyenziselwa iinkonzo ezincinci okanye ubhaptizo.
Kwelinye icala, iqela linokuba liqela lokuhamba, ngokubanzi liquka iqela elincinci leemvumi. Kodwa ngaba ukutolikwa kwephupha kulutolika njani olu phawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «indlu yenkonzo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «indlu yenkonzo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «indlu yenkonzo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «indlu yenkonzo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uphawu lwephupha "i-chapel" livela ephupheni, ke oku kuhlala kusisikhumbuzo senkolo kunaleyo yokukhankanya iqela elikhankanyiweyo.
Si el mundo kumaphupha kusekho malunga nomculo weqela, uphando lwamaphupha lubona oku kucacile isicelo ndiphupha ngokuzinikezela ngakumbi kwicala elimnandi lobomi kwaye mhlawumbi ubuyele kumdaniso. Ukuba oku kungangabonakali ngathi konke konke, umntu makazame ukubuyela kwizinto ezintle nezingakhathaliyo ebomini rhoqo kunangaphambili.
Ukuba iphupha ngokwakhe lisendlwini yamava akhe ephupha lokuthandaza apho okanye ukugcina ukuzinikela kunye nabanye abantu, olu luphawu oluqinisekileyo ngokutolikwa ngokubanzi kwephupha kwaye kufanekisela iphupha ibhalansi yangaphakathi Unayo kwaye useluxolweni kunye nehlabathi.
Ukuba uziva ulahlekile emthandazweni, thembisa oku inkxaso kwaye iyanceda ngamaxesha anzima. Ungathemba ukuba awuwedwa kwaye abanye abantu baya kukunika inkuthazo kunye namandla. Kubantu abancinci abaphupha ngecawa, lo mfanekiso unjengephupha unokuqondwa njengophawu lwabahlobo bobuxoki. Kufuneka ulumke nawe apha Lumka Ndiyazi ukuba bathembela kubani, kuba apha kukho ingozi yokungena kwinkampani engeyiyo.
Uphawu lwephupha «indlu yenkonzo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, uphawu lwephupha "isonto" lifanekisela ngaphezu kwako konke ubudlelwane kunye inkolo. Mhlawumbi ngasemva kwala mava ephupha kukwakhona imeko yomzuzwana ebomini efuna ukuba urhoxe kancinci kwaye Ukujonga ngaphakathi gcina. Oku kunokuthetha ukuba iphupha kufuneka kuqala lizibonise.
Xa kuziwa kwizigqibo, kubalulekile ukuqwalasela ngononophelo ukuba ziya kwenziwa njani kwaye njani. Ngamanye amaxesha ufika kwinqanaba ebomini apho uqala ukubuza ngobomi bakho bangaphambili.
Sebenzisa amandla owafumanayo kweli phupha ukujongana nobomi bakho kwakhona. Kubalulekile ukuba ufumanise ukuba zeziphi iimvakalelo Bakukhapha ephupheni.
Ukuba kwindlu yecawe kunokuzisa imeko ezolileyo yoxolo noxolo. Nangona kunjalo, ukuba ufumana iimvakalelo ezinje ngokuba nesizungu okanye ukudana, ngokutsho kwabaphandi bephupha, oku kunokuba sisalathiso sokuba uzahlula kakhulu kwaye uyarhoxa ebomini.
Zama olu donga Ukwahlulahlula kwaye uqhekeze ukwahlukana ngokubuyela kunxibelelana nabanye abantu nokunxibelelana kwakhona noluntu.
Uphawu lwephupha «indlu yenkonzo» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "indlu yenkonzo" luphawula ukungqubana ne amaxabiso akho kunye nenkolelo yakho.
Le ikwayimibuzo esihlala sihlangana nayo Indlela yobomi dibana: ndivelaphi? Uyintoni umsebenzi wobomi bam kwaye siyaphi emva kobomi bethu basemhlabeni? Ukuba uphupha i-chapel, kuya kufuneka ukhathalele le micimbi yokomoya.